” Godina Booranaa kana keessaa warra yeeroo darbe Hidhame cufa Yaaballotti Birrii 4000 hirteefii Bilxiginnaa filadhaa jettee galchite. Bilxiginnaan namoota qarshiin bitachuuf yaalii godhaa jirti! – Kichuu
HomeAfaan OromooNews” Godina Booranaa kana keessaa warra yeeroo darbe Hidhame cufa Yaaballotti Birrii 4000 hirteefii Bilxiginnaa filadhaa jettee galchite. Bilxiginnaan namoota qarshiin bitachuuf yaalii godhaa jirti!
Tahuuyyuu ammoo namoonni qarshii fudhatanii biraa deemaa jiru” opdo maraatuu Qorsaa hin qabnee maachaa jirtii muki isiin hin koree fi booltii isiin Qotaa hin jirree hin jiruu uummaatni nama filatuu fi dhiisu gargaarii beeka birrin ummaata hin ajajuu ummaata beekomsii isaatu gahaadha ummaatni mirgaa abbaa biyyummaa ofii birriin gurguruu sammuun opdon yaadu sammuu bulguuti !!!! uummaatni keennaa Loon ofii malee mirgaa ofi hin garguraatu hojii cubbuu uummaata irraa dhaaba.
#ODUU AMMEE!!#Share gochuun waliin gahaa!Seenaan addaa hojjatameera!
Miseensonni #Poolisii Humna addaa. Oromiyaa kana gara Lixa Oromiyaatti
ergame keessa Namoonni 31 gara qabsoo.haqaatti WBOtti makamaniiru! Kun
Injifannoon guddaadha! Ida’amuun “Maddamar” inni dhugaa. kanaadha!
Iddoon goototiin humna addaa Poolisii. Oromiyaa keessa gara WBOtti lda’amani itti
dhalatan kunooti; Namni saddeet (8) dhalataa Wallaggaati, Namni jaha 6 dhalataa Harargheeti,
Namni Afur 4 dhalataa Arsiiti, ~Namni lama 2 dhalataa Jimmaati,Namni tokko 1 dhalataa lluu Abbaa
Boorati, Namni sadi 3 dhalataa Booranati, Namni Afur 4 dhalataa shawaati, namni sadi 3 dhalataa Baaleeti, ljoolleen Oromoo Raayyaa ittisa Biyyaa. keessa, Poolisii Humna Addaa Oromiyaa
keessa, Poolisii Oromiyaa keessa akka gara. Qabsoo Haqaatti WBOtti Dhufanii makamanii
Bilisummaa Oromoofi Walabummaa. Oromiyaa mirkaneessinu dhaamsa.Oromummaa dabarsaniiru!
Ethiopia, Gadaan Abiy, Gadaan. Bilxiginnaa Xumuramee jira!! Barana Taatu filannoon!
Diddu hidhannoon.Mootummaa ummata Oromoo hundeessuun. Dirqama! #Kalaas !
Warri gara qabsoo haqaatti dabalamtan